China Vhura Type Metal Sheet Fiber Laser Kucheka Machine Manufacture uye Fekitori | Knoppo
Muenzaniso Nhamba: KF3015
KF3015 yakavhurika mhando faibha laser yekucheka muchina inonyanya kushandiswa simbi sheet kucheka. 1000W, 1500W, 2000W, 3000W, 4000W uye 6000W iripo.
Inoshanda Zvishandiso zveFiber Laser Kucheka Machine
Kucheka Stainless simbi, kabhoni simbi, nyoro simbi, alloy simbi, galvanized simbi, nesilicon simbi, chitubu simbi, titanium sheet, galvanized sheet, iron sheet, inox sheet, aruminiyamu, mhangura, ndarira uye mamwe simbi pepa, simbi ndiro, simbi pombi uye chubhu, nezvimwewo.
Inoshanda Maindasitiri eFiber Laser Kucheka Machine
Zvikamu zvemichina, zvemagetsi, simbi yekugadzira simbi, kabati yemagetsi, kitchenware, lifti pani, maturusi emidziyo, simbi yakavharirwa, mabhii echiratidzo chekushambadzira, marambi ekuvhenekesa, hunyanzvi hwesimbi, kushongedza, zvishongo, zviridzwa zvekurapa, zvikamu zvemotokari uye dzimwe minda yekucheka simbi.
Chizvarwa Chechitatu Chikandira Aluminium Beam
Iyo inogadzirwa neaerospace zviyero uye inoumbwa ne4300 tons press extrusion molding. Mushure mekurapa kukwegura, simba rayo rinogona kusvika 6061 T6 iyo ndiyo simba rakasimba pane dzose gantries. Aluminiyamu yendege ine zvakawanda zvakanaka, senge kusimba kwakanaka, huremu huremu, corrosion resistance, anti-oxidation, low density, uye kuwedzera zvakanyanya kumhanya kwekugadzirisa.
Switzerland Raytools Laser Musoro
Inoshanda kune akasiyana akatarisa kureba, ayo anodzorwa nemuchina chishandiso chekudzora system. Focal point inozogadziriswa otomatiki mukucheka maitiro kuti iwane yakanakisa yekucheka maitiro eakasiyana makubvu masheets esimbi. Kuwedzera perforation yakatarisa kureba, zvakasiyana kuseta perforation yakatarisa kureba uye kucheka kwakatarisa kureba, kunatsiridza kuchekwa chaiko.
CYPCUT Kudzora System
CYPCUT Kudzora sisitimu inogona kuona yakangwara dhizaini yekucheka magiraidhi uye kutsigira kuendesa kweakawanda magiraidhi, optimize yekucheka maodha otomatiki, kutsvaga mipendero zvine hungwaru uye otomatiki chinzvimbo. Kudzora sisitimu inotora yakanakisa logic programming uye software yekudyidzana, inopa inoshamisa mashandiro echiitiko, zvinobudirira kusimudzira mashandisirwo epepa simbi uye kuderedza tsvina. Yakareruka uye inokurumidza mashandiro sisitimu, inoshanda uye yakarurama yekucheka mirairo, zvinobudirira kuvandudza ruzivo rwemushandisi.
BCS100 capacitive urefu controller (inozonzi BCS100) chishandiso chepamusoro-chekuita chekudzora chinoshandisa nzira yakavharwa-loop yekudzora. BCS100 inopawo yakasarudzika Ethernet yekukurukurirana (TCP / IP protocol) interface, inogona kuita mabasa mazhinji zviri nyore neCypCut software, senge otomatiki yekutevera kureba, kuboora kwezvikamu, kuboora kunofambira mberi, kutsvaga kwemupendero, kusvetuka, kusvetuka-svetuka, kuseta kwekusimudza-up. yekucheka musoro.Chiyero chekupindura kwayo chinovandudzwawo zvakanyanya. Kunyanya mu servo control maspects, kumhanya kwayo nekurongeka kunofanirwa kunge kuri nani pane zvimwe zvigadzirwa zvakafanana, nekuda kwemaviri akavhara-loop algorithm yekumhanya uye chinzvimbo. Tsigira alarm paunenge uchirova bhodhi uye kupfuura kumucheto. Tsigira kumucheto kuona uye otomatiki kuongorora.
Nhoroondo ye KF
Sheet Kucheka Nzvimbo
X/Y-axis Positioning Kururama
Max. kasi yekubatanidza
Zvakapfuura: Metal Sheet Uye Tube Fiber Laser Kucheka Machine Kubva kuChina
Zvinotevera: 1390 Metal And Nonmetal CO2 Laser Engraver And Cutter
fiber laser yekucheka muchina
simbi yekucheka muchina
simbi laser yekucheka muchina
simbi sheet fiber laser yekucheka muchina
simbi sheet laser yekucheka muchina
sheet fiber laser yekucheka muchina
Carbon Stainless Steel Fiber Laser Cutter Ine ...
1kw 1.5kw 2kw 3kw 4kw Single Tafura Fiber Laser ...
4KW 6KW 8KW Steel CNC Fiber Laser Kucheka Machi...
Metal Sheet Uye Tube Fiber Laser Kucheka Machin...
Dual Yakashandiswa Metal Pipe Uye Plate Fiber Laser Cutt...